2 no ho 1 no nandavoan’ny ekipan’i Manjakaray ny Cnaps Sport. Nitarika tamin’ny alalan’ny isa 1 no ho 0 teo amin’ny segaondra faha-55 anefa ireto mpilalaon’Itasy ireto, saingy resy ihany tamin’ny farany. Mitady ho tapitra hatreo izany ny nofinofin’ny Cnaps Sport hanao pao-droa taorian’ny efa nahazoany ny amboaran’i Madagasikara tamin’ity taom-pilalaovana ity. Na izany aza anefa dia mbola miankina amin’ny andro fahatelo ho an’ity "poule des AS" ity ihany ny vokatra rehetra.
Rahampitso dia manana tombony ihany ny ekipan-dRabri sy Abdou satria ekipa heverina ho vahiny eo amin’io fifaninanana io ny Asjf Capricorne hihaona farany amin’izy ireo. Ny Akademia Ny Antsika kosa no hifanandrina amin’ny ekipan’i Titi Rasoanaivo sy Jean Marie.
Tamin’ny alalan’ny isa 1 no ho 0 teo amin’ny fizaram-potoana voalohany no nitarihan’ny Asjf Capricorne ireo zandrikelin’Antsirabe. Mbola nahazo "penalty"» teo amin’ny fidirana voalohany ihany koa aza ny mpilalaon’i Toliara, saingy tsy matin’i Melin Vitazara. Baolina niadiana tao anaty faritra tsy azo ivalozan’i Toliara no voakitik’i Jimmy Simouri, ka nahasahalan’ny Akademia Ny Antsika ny isa ho 1 sy 1.
Rahampitso izany no hivoaka etsy Mahamasina ny tompondaka vaovao handimby ny Cnaps Sport.